The 11 Kulan PlayStation aad gabi ahaanba ma dhici karta in sanadka soo socda - Rule News
The 11 Kulan PlayStation aad gabi ahaanba ma dhici karta in sanadka soo socda
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “The 11 Kulan PlayStation aad gabi ahaanba ma dhici karta in sanadka soo socda” waxaa qoray Samuel Gibbs, waayo theguardian.com on 16 Tuesday June 2015 12.00 UTC
Sony tusay off ururinta badan oo ah kulan cusub, faahfaahin cusub on xubno gaar ah in qaar ka mid ah kulamada waa weyn, oo ku dhawaaqday in ay Project Morpheus headset xaqiiqada dalwaddii la heli sanadka soo socda.
Beyond ku remake Final Fantasy VII, iyo Ololaha Shenmue III Kickstarter, halkan waa 12 waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan Sony ee line-PlayStation ee sannadka soo socda.
Sony ee headset Project Morpheus VR laga heli doonaa in qeybtii hore ee sanadka soo socda. Sawir: Jae C. Hong / AP
Sony shaaca a gelinno yaryar ah oo ku saabsan in ay headset xaqiiqada dalwaddii iyo mashruuca tartan Oculus Morpheus at E3. Waxaa laga heli doonaa in qeybtii hore ee sanadka soo socda, ujecel "dhawr boqol oo doolar" iyo hareeraha yeelan doontaa 30 kulan, laga bilaabo kulan xujo iyo nasashada in a-qof ugu horeysay multi-ciyaaryahan jabkii dhabta ka dhac ah Studios.
The Guardian-ka hore
The Guardian hore ugu dambeyntii laga heli doonaa inuu u ciyaaro ee sanadka soo socda ka dib markii in ka badan shan sano sugitaanka.
Sony dib-u-ku dhawaaqay Guardian Dambe, ciyaarta aadka loo filayo saddexaad ka Abuuraha reer tacabur amaano Ico iyo Shadow of Colossus, taas oo kuu gelineysaa in ay gacanta of wiil dhalinyaro ah sahaminta burbur ah iyadoo la kaashanayo shimbir wax Rafaa eey /.
Shan sano ka hor Sony soo bandhigay kulankii ka dhacay garoonka E3 for PS3 ah, hadda shirkaddu waa balanqaaday waxaa ugu dambeyntii la heli doonaa inuu u ciyaaro on PS4 sanadka soo socda.
Agaasimaha taxanaha, Fumito Ueda, weli madax doonaa ciyaarta, inkastoo mar dambe u shaqeeya Sony.
No Man ee Sky
The kulan sahaminta meel hannaan ahbaa ballan Caalamka lahayn in ay dunta dhexeeya, ka heli nolosha cusub iyo qarxiyaan alaabtii. Sawir: No Man ee Sky
ciyaarta sahaminta meel Epic No Man ee Sky ka sameeysa British Games Hello waxaa laydiin tusay off, oo ay ku jiraan dagaalo, aqoonsiga qaar ka mid ah noocyada shisheeye oo yara wanaagsan oo wax ku baabbi'iyo deegaanka - wax walba oo aad rabto in aad ka lahaa khibrad Star celiso-sida inuu geesinimo kaga tago meel aan cidna ayaa ka hor.
Nuqdada iibinta weyn ee ciyaarta waa baaxadda sheer: nidaamyada xiddiga hannaan ahbaa lahayn sugeysid ciyaartoyda kala dunta fidsan iyo bilowdo sahaminta, oo dhan abuuray by 10-qof sameeysa a indie ku salaysan in Luce.
Mind maqnaan dinosaurs joofane in Horizon Zero Dawn.
khilaafka 4 waa in aan dunida oo keliya post-apocalyptiga sugaya isagana PS4. A ciyaarta roleplaying-qof saddexaad ka Killzone Games dhuumaalaysiga sameeysa, Horizon: Zero Dawn bandhigaysaa dunida cusub kordhaya out of a halaagnay jir ka mid ah halkaas oo mashiinada sare ee silsiladda cuntada fadhiisan. Ciyaarta ayaa qoreysa ninkii dumar ah, hub guriga-dhigay iyo ugaarsiga ah ee dinosaurs joofane weyn, taasoo soo baxay sanadka soo socda.
Xarriiqay inay 4: Tuug ee End
Nathan Drake ayaa biimayn la filayo ee la soo dhaafay. Sawir: Sony
aadka filayo taxane ciyaarta u quudhin Sony ayaa yeelan doona kulan ay afaraad oo la filayo final sanadkan. Xarriiqay inay 4: Tuug ee End quudin doonaa taageerayaasha badan oo la mid ah la muran, toogashada, fuulitaanka iyo tartanka iyada oo waddooyinka magaalada. Indiana Jones magac kasta oo kale oo.
kulankii ugu dambeeyay ka Little Big Planet-abuure Media Britain waa kulan kale oo dhista-aad-u gaar ah grand. Markan waa ka yar oo ku saabsan Caalamka dhar yar oo dheeraad ah oo ku saabsan abuurista waxyaalaha dunida riyo oo kale ah.
Pretty wax badan ayaa laga abuuri karo gudahood farshaxanka jawiga ciyaarta oo ay ku jiraan, kulan, aflaamta iyo muusigga, muuqata.
Waxyaabaha aad u hesho cajiib kaynta. Sawir: Firewatch
Ma jeceshahay kaambada? A line sheeko cajiib ah? Markaas Firewatch Campo Santo ayaa laga yaabaa inuu aad u. Waxaad ciyaari nin aan shaqo qaadataa sida fiirsasho kaynta ka dib markii uu naftiisa shakhsi ayaa kala firdheen,, iyadoo kaliya uu xiriir wada-shaqaale dumar badan radio marka wax la yaab leh bilaabin ka dhacaya cidlada.
aayaha: King ee la Qaaday
sheekada More, weerarada ka badan oo ah exclusives yar PlayStation in ballaarinta aayahooda soo socda.
Sida ciyaarta asalka, ballaarinta cusub aayaha ugu wacan in September yeelan doonaan arimo dhowr ah oo gaar ah si ay u consoles'ka Sony ee. isagana PS3 iyo PS4 heli doonaa inuu ka ciyaaro joojinta dheeraad ah u yeedhay qolkii Echo la diriraya dhibin, qaar ka mid ah hubka gaar ah iyo qoriga ah indheynta qalaad cusub baaxadda toogte-sida la yiraahdo Bakayle Jade ah.
Call More of Duty, Wakhtigan la beta gaar ah on Console Sony ee. Sawir: Christian Petersen / Getty Images
juggernaut Activision ee a jabkii dhabta-qof ugu horeysay, Call of Duty Black OPS III, arki doonaa maps cusub gaar u PlayStation ah 4, halka imtixaanka beta online ee ciyaarta ayaa sidoo kale la xadidaa, waxaana Console Sony ee.
dunida A cusub ee dilka u sugnaaday. Sawir: Michael Nelson / EPA
The Agent dilay bidaarta-madax 47 waa mar kale dib, oo la mid ah Black OPS III, Weeraryahanka ugu danbeeyay ordi doonaa iyada oo loo marayo baaritaanka beta ee ciyaarta a si gaar ah on PS4 ka hor la bilaabay. Filo rabshado dheeraad ah iyo aargoosiga.
World of Fantasy Final
A remake Final Fantasy VII ma ahaa news kaliya ee ka taxanaha. ciyaarta A for PS4 iyo PS Vita loo yaqaan World of Final Fantasy ayaa sidoo kale soo bandhigay for 2016, muuqan a collection of versions cutesy jilayaasha Fantasy Final classic. Waxa ay sameyn doono ayaa waxaa run ahaantii ma shaaca ka qaaday.
• E3 2015: Ubisoft qorsheyneysa hami bulshada waayo-aragnimada dhabta ah dalwaddii
• E3 2015: Cigal waa Ruuxa Wildlands noqon doontaa kulan furan abid dunida ugu weyn Ubisoft ee
• E3 2015: thrills Xbox la Lara Croft, HALO 5 iyo holographic Minecraft
Microsoft Lumia 950 Dib u eegista ay qarka u saaran
$1.6B Brain Jilidda Project bilaabay in Switzer ...
Google maps online tago ka dib markii
20230	0 Qodobka, Call of Duty, Dhaqanka, E3, E3 2015, Ciyaaraha, News, PlayStation, Playstation 4, Samuel Gibbs, Sony, Technology, xaqiiqada Virtual, Caalamka Virtual
← Qaliinka ididiilo hore aadanaha xubin madaxa ka dhigaysa garoonka dhakhaatiirta Maraykanka Ahaa Nokia ah 3210 telefoonka ugu weyn ee waqtiga oo dhan? →
Apple bilaabay iPhone XS, Max XS oo Janumet
iPhone 2018 Daahfurka: Waxa laga filayo Apple
Amazon bilaabay Fire HD 8 Tablet la New Echo-sida Xirasho
Oogada Microsoft Go Review
Honor Play – Ciyaaraha Review Phone